Sababta dhimashada Savannah Dekker ma go'aansan karo NFI
De Telegraaf wuxuu sheegay in sababta keentay geerida Savannah Dekker aysan go'aansan karin NFI. Frank de Groot, oo loo yaqaan 'Anass Aouragh', ayaa ah cilmi-nafsi (hadda waa la tagay NFI si uu u noqdo mid madaxbannaan). Tani "khabiir" waxa ay sheegaysaa in jir biyo ah oo dhowr maalmood ah ay weli adag tahay in la ilaaliyo. Nasiib wanaag, [...]
Horumarka muhiimka ah ee Romy Nieuwburg iyo ganacsiga Savannah Dekker!
Trick waa inay soo jiidato dareenka sida warbaahin wax walbo oo aad rabto oo aad u jeediso taxadarka markaad rabto. Tusaale ahaan, dhowr waddan oo ay awoodaan in ay soo bandhigto ciyaarta Pokemon Go by xidhiidhisid shil, taas oo aan ogaaday in ay ahayd suuq-geynta si fiican loo bixiyo [...]
Dhaqdhaqaaq deg-deg ah oo ka socda kiiskii Romy iyo Savannah: bilaysku waa la xidhay qalalan halka "Savannah laga helay"
Inkasta oo ay hadda tahay bil iyo badh kahor Savannah Dekker laga helay duqayn, haddana caddaaladda ayaa si lama filaan ah u go'aansatay in ay ka baxdo tuulada De Kronkels. Muxuu yahay caddaynta sababay caddaaladda si ay u sameeyaan arrintaan hadda waa mid gebi ahaanba cad, sababtoo ah cida go'aamisa bil iyo badh kadib [...]
Bayaanka ka soo horjeeda sarkaalka bilayska maxaliga ah ee dacwadda Romy iyo Savannah
Inkastoo booliska oo kaashanaya warbaahinta run ahaantii siin jawaabaha Romy iyo Savannah ay fiican muuqata in arrinta Romy iyo Savannah iyo gaar ahaan aragti ah in wax wanaagsan sida xallin yihiin, tani gabi ahaanba waa kiiska ma. Wiilka dila lahaa Romy Nieuwburg waxaa loo yaqaan warbaahinta, waxaana [...]
Psyop spider oo looga shakisan yahay inuu kufsaday Romy Nieuwburg ee Romy iyo Savannah?
"The wiil 14-sano jir ah ayaa qirtay inuu isagoo kufsaday oo lagu dilay uu fasalka Romy Nieuwburg (14) ee Hoevelaken, soo orday ka dib markii uu fal waqti lahayn in ay argagixin. Tani waxay caddaynaysaa dib u dhiska dhabta ah ee raadadka uu ka tagay saaka aroornimadii jimcaha ee 2 June. Dembiilaha ayaa wali cabay galaas liin ah oo ku taal waddanka [...]
Dacwadda Romy & Savannah waxay ku xiran tahay sheekooyinka warbaahinta iyo "caddayn"
Waxay sii tahay sheeko la yaab leh oo la mid ah tan la mid ah Romy iyo Savannah. Dabcan, kama maqalno wax ku saabsan dilka Romy. Ka dib dhan, waxaa la xalliyaa ". Dembiiluhu wuu ogyahay. Wiil 14-sano jir ah ayaa ku xadgudbay oo dilay Romy. Sidii uu u fuliyay waxyaabahan mucjisooyinka ah lama sheegin, haddii ay hore u soo sheegto, [...]
Xaaladda Romy iyo Savannah hadda waa laga qabsaday?
Waxyaabaha intooda badan lagu dhaleeceynayo ama ka mid ah muxaadarinta rasmiga ah ee loo yaqaanno su'aasha, waxaad u aragtaa in lagu aamusnaado sida ugu dhakhsaha badan. Xeeladahani waxay la mid tahay sida aad uga careysiiso ilmo oo ooyaya sababta oo ah waxay rabtaa dareen. Waxaad dhigtaa mujuraca afka ama waxaad siineysaa [...]
Miyay kuwan magacyada dadka tuhmanayaasha ah ee Romy Nieuwburg iyo Savannah Dekker?
[Warbixin: Marka hore u akhri faylka oo idil ugu dambayntii] Waxaa cad in dilka Romy iyo Savannah ay wali mashquul yihiin. Inkasta oo uu ahaa mid si qoto dheer uga fikiraya aragtida ku saabsan maqnaanshaha suurtagalnimada Romy, ayaa laga caawiyay adduunka, ficillada Facebook waxay u muuqatay inay noqdaan kuwo ka mid ah riyooyinka iyo dadka waayeelka ah [...]
Ku dhamaada Romy Nieuwburg ee dacwadda Romy & Savannah ayaa ka dhacay: Su'aalo badan oo badan!
Waxaan helay jawaab badan oo maqaalkayga ku saabsan Axadda, Juun 11, oo aan daabacay fikrad shirqool ah oo ka yimid akhristaha oo u maleeyay in Romy Nieuwburg aysan jirin (eeg halkan). Halkaas ayaan sidoo kale ka helay qaar ka mid ah faallooyin cadho ah oo ka yimid akhristayaasha kuwaas oo helay inaan ixtiraam darro ah in aan soo saari karo wax sidaas oo kale ah. Waxaan si buuxda u fahamsanahay, [...]
Yuu ahaa Romy Nieuwburg iyo maxay tahay xiriirka ka dhexeeya dilka Romy iyo Savannah?
[Update: Read file oo dhan ugu horeysay oo aan arko sida ay goob soo socda waxaa leh burrinta sharcigaas, laakiin keentay in fikradaha cusub. Sidaa daraadeed guji koollada kor ku xusan oo akhriya maqaalkii ugu dambeeyay]
Guud ahaan Wadarta: 1.381.922